Ungazifunda kanjani ezinye izincwadi ngonyaka | Izincwadi Zamanje
Funda. Lowo mkhuba abaningi abawukhohliwe. Kodwa-ke, kunabambalwa abasaphethe incwadi ezandleni zabo, kungaba ephepheni noma edijithali, futhi basebenzise leso sikhathi esincane abanaso sokuthuthuka ekuyifundeni.
Kodwa-ke, inani elikhulu labantu, noma ngabe yiSpanish noma umhlaba, ngeke bathole incwadi ifundwe ngonyaka. Abanye bazokudlula kakhulu. Uma ufuna ukuba kuleli qembu lesibili, udinga ukuzijwayeza ukufunda. Kepha futhi nokuthi uyathanda ukukwenza. Ngakho-ke, Sizokunikeza amathiphu ukuze wazi izindaba, hhayi encwadini eyodwa kuphela, kodwa kusuka kwabaningi, njalo ngonyaka.
1 Inselelo enkulu yamasiko: ukufunda izincwadi eziningi
1.1 Yiba nekhoneni lakho lokufunda
1.2 Khetha izincwadi ngokuholwa yilokho okuthandayo
1.3 Chitha isikhathi esincane ufunda usuku ngalunye
1.4 Uma ungayithandi incwadi, yibeke phansi
1.5 5. Funa izincwadi ezikudonsela amehlo, ungaholwa yimfashini
Inselelo enkulu yamasiko: ukufunda izincwadi eziningi
Kungase kubonakale kuwubuwula. Kepha izincwadi zokufunda zinezinzuzo eziningi. Uma ufunda eyodwa sekuvele kuyimpumelelo; Kodwa-ke, engikuphakamisayo ukuthi, okungenani inyanga, indaba eqala futhi iphele iwela ezandleni zakho.
Ukuthatha isikhathi esincane akunzima, futhi uzothola inzuzo enkulu kukho.
Manje, ungakufinyelela kanjani?
Yiba nekhoneni lakho lokufunda
Kubaluleke kakhulu ukuthi ube nendawo yokuphumula futhi uzinze ekufundeni. Ukufunda ngenkathi ulinde izingane zakho ukuthi zenze umsebenzi wasekhaya, noma ukuvula ithelevishini, akuyona into enhle kakhulu, ngoba ukugxila ngeke kufane.
Isihlalo, isibani. Konke lokhu kufayela le- ekhoneni ethule ekhaya lakho kuzokwanela ukuqala indaba elindele ukuxoxwa engqondweni yakho.
Khetha izincwadi ngokuholwa yilokho okuthandayo
Kunezinhlobo eziningi zezinhlobo zemibhalo futhi ngokuqinisekile uzothanda enye kunezinye. Uma ungazi, khona-ke ngiphakamisa lokho inyanga ngayinye khetha ibhuku ngengqikithi okuhlukile: ezothando, ezithandekayo, ezethusayo, izindaba eziqanjiwe zesayensi, iphupho ...
Ngale ndlela, uzokwenza ngcono izinto ozithandayo njengoba, uma ungazithandi, kungenxa yokuthi lolo hlobo lwezinhlobo kungenzeka lungabi olwakho. Ngakho konke lokho, ngiphakamisa ukuthi uzame amahlandla ambalwa. Mhlawumbe akuyona uhlobo uqobo ongaluthandi, kodwa indaba yaleyo ncwadi.
Chitha isikhathi esincane ufunda usuku ngalunye
Njengoba ngishilo ngaphambili, njalo singathatha imizuzu embalwa ukufunda. Ngakho-ke, cabanga ngosuku lwakho, ngakho konke okufanele ukwenze, futhi khetha isikhashana lapho uzokwazi khona ukufika encwadini ungaphazanyiswa muntu. Noma ngabe kuyigamu lehora.
Ngikholwe, uma le ndaba ikubamba, ekugcineni uzofuna ukuchitha isikhathi esithe xaxa, hhayi lokho kuphela, kodwa uzothatha incwadi elandelayo ngomdlandla omkhulu ngoba uzolindela ukuzizwa ngendlela efanayo naleyo edlule.
Uma ungayithandi incwadi, yibeke phansi
Kwabaningi, lokhu kungukuhlambalaza. Kepha uma ungenawo umkhuba wokufunda, uma uphethe incwadi ongayithandi, noma uma sekuyisikhathi sokufunda wenza noma yini ngaphandle kwalokho, akusona isikhathi saleyo ndaba.
Uma kunjalo, hlala unendawo eyodwa noma ezimbili esandleni ongalandela ngayo inqubo yakho yokubhala nsuku zonke. Ngakho-ke kuyohlale kukhona ukubhuka okuzobe kulinde ithuba laso uma kwenzeka ukhetho lokuqala belungafanele.
5. Funa izincwadi ezikudonsela amehlo, ungaholwa yimfashini
Ukuhamba ngezincwadi ezithengiswa kakhulu yinto embi kunazo zonke ongayenza. Anginakho okuphikisana nakho, kodwa ingcebo yokubhala eyiqiniso ayikho phakathi kwalezo zinhlu. Kwesinye isikhathi kungcono ukuthi wenze ucwaningo oluncane bese uthathwa umxhwele, kungaba ikhava noma amazwibela, ukuyithenga nokuyifunda.
Kuzoba nesikhathi sokufunda izincwadi ezivela kakhulu emaphephandabeni, komagazini, kuthelevishini noma kwi-Intanethi.
Futhi ukuthi ukufunda izincwadi eziningi ngonyaka akunzima, kufanele ukubheke njengenselelo. Kepha enye yalezo ozohlangana nazo ngempela. Khumbula ukuthi ungakhetha emakhasini angama-300 futhi, uhlukaniswe ngezinsuku zenyanga, uthola amakhasi ayi-10 ngosuku. Ngabe ulinde ukuqala ngawokuqala?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Ungazifunda kanjani ezinye izincwadi ngonyaka
Izindlu zokubhuka zezikhathi zokuhlala ekhaya